कुन नङ फूदा के हुन्छ ? आफ्नो नङ हेरेर पत्ता लगाउनुस् ! - कुन नङ फूदा के हुन्छ ? आफ्नो नङ हेरेर पत्ता लगाउनुस् !
कञ्चनपुरमा फेरि अर्को घटना : १२ वर्षीय बालक मृत फेला ! | निर्मलाले जन्माइन तिम्ल्याहा बच्चा, तीनवटै शिशु एनआईसियुमा | साढे तीन हजार मुद्दा फछ्र्यौट | हुम्लाका आठवटै वडामा नुनको अभाव, एक किलो रु ७० ! | ट्र्याक्टरले किचेर बालकको मृत्यु
कुन नङ फूदा के हुन्छ ? आफ्नो नङ हेरेर पत्ता लगाउनुस् !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २९ जेठ, 11:35:38 AM
काठमाडौं । केटाकेटी युवायुवती वा बुढाबुढी सबैको औलाको नङ फुलेको पाइन्छ । बालबालिकाहरु नङ फूले नयाँ लुगा लगाउन पाइन्छ भन्दै रमाउँछन्।
के साँच्चै नङ फुल्नु सौभाग्यको सूचक हो ?
केही प्रचलित मिथकः हालतका सबै नङ एकैपटक फूले त्यसले व्यक्ति ठुलो मानसिक संघर्ष झेल्दैछ र उक्त व्यक्ति भविष्यमा बिरामी पर्छ भन्ने संकेत हो ।
दायाँ वा बायाँ हातको बुढी औलाको नङ फुले त्यसले निकट भविष्यमै प्रेम मिलनको संके गर्छ भने नङमा काला टिकाहरु देखिएविपरीत फल भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
साहिँली औंलाको नङ फूले मानसम्मान धन तथा यश प्राप्तिको योग बन्छ । त्यसको विपरीत काला छिटाहरु देखिए अपमान, अपजस तथा बदनामीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कान्छी औलाको नङमा देखिने सेता दाग व्यापारमा लाभ तथा लक्ष्य प्राप्तिमा अनुकुलताको सूचक मानिन्छ । काला दागले भने त्यसको विपरीत फलको संकेत गर्दछ ।
चोरी औंलाको नङ फुले प्रेम विजय, मानसम्मान तथा धन प्राप्तिको संकेत मिल्छ । यसको विपरीत काला छिटाहरु देखिए धन तथा मानहानी हुनसक्छ । माझी औलाको नङ फुले यात्राको योग परेको मानिन्छ । त्यसविपरीत काला छिटाहरु देखिए यात्रामा नोक्सानी तथा दुर्घटनासमे भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
नङ पँहेलो देखिए व्यक्तिको स्वास्थ्यको दृष्टिले प्रतिकुल अवस्थामा रहेको मानिन्छ । यसैगरी रातो तथा नीलो रंग देखिनु पनि अशुभ मानिन्छ । फुलेको नङको प्रभाव बढीमा पाँच महिना रहने विश्वास छ ।एजेन्सी
२०७५, २९ जेठ, 11:35:38 AM
अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै अनशन जारी, थपियो पुनः तीन माग
बर्दी खोल्न तयार छु निर्मला हत्या अनुसन्धानमा गल्ती भेटिए : प्रहरी महानिरीक्षक
पक्की बन्छ सिक्लेस जाने बाटो : अध्यक्ष दाहाल